Buusa fi Gonofaa – walgargaarsa bara rakkoo – Awash Times
April 8, 2020 Malka Wabe Uncategorized Leave a comment
Sirni Gadaa Oromoo qabaataf rakkataadhafis akkaataa itti waliin jiraatan sirna qaba. Akka falaasama Gadaatitti qabeenya (loon, laftif biqiltuun) kan nama tokkoo ykn abbaa tokkichaa osoo hintaane kan gosa guututi.
Gosti tokko mataa gosa sanii qaba. Qabeenya namoota dhuunfaa akkaatan rakkataanis itti fayyadamu sirnatu jira. Sirni kunis gara naannaa tokko tokko Buusafi Gonofaa jedhama. Naannoo kaanitis maqaa adda addaa qaba. Haata’u malee Gadaa keessatti kaayyon isaa waluma fakkaata.
Bara roobni dhabame, bara dhukkubni seenee, bara wanni dur mul’atee hinbeekne mul’atee namni harka qalleessi rakkate abbaa ollaa ykn gosaa, gosa ofii walitti qabee harka qalleeyyii akka gargaaraman gaafata. Kuni namoonni qaban loonis haata’uu midhaan namoota hinqabneef akka hirphan gaafataman. Namoonni qaban kunis qabeenyi kan dhuunfaa isaanii osoo hintaane kan gosaa ta’uu beeku. Maarree qabeenyi koo qofaa mitii, kan gosaatii gosti waan malu kennaafii jedha. San booda akka malutti qabeenya kanarraa kan rakkateef kennan.
Haala kanaaf kan dhibame akka wal’aanamu, kan beela’e akka nyaatu, kan deege akka hirphamu, kan dheebote akka dhugu taasifama. Kana gochuudhaf namni gosa qabaachuun murteessadha.
Haala kana keessatti namni gosa hinqabne waan rakkoo adda addaa irra gahuun danda’uuf Oromoon nama gosaan ala dhufee qubate tokko gosa ofii galcha. Moggaasni sababa barbaachisuuf keessa sababni tokko gost yeroo rakkoo akka buusafi gonofaa buusaniifi. Gosa ofiitin alas ollaa rakkate, kan fagootti rakkates gargaarun jira.
Yeroo rakkoo guutuu biyyaatitti dhufe, kan akka dhukkuba vaayrasii Koronaa kuni dhufes gosti walitti dhufee, biyyi mari’atee kan hinqabne gargaarun akka aadaa durii Oromoo buusaf gonofaa kennuun barbaachisaadha. Namni harka qalleessi bara akkanaa kana dhukkuba qofaan osoo hintaane qoonqof rakkoowwan biraatif saaxilama. Nyaata ofiifi daa’ima ofiitif argachuuf jedhee dhukkubaaf saaxilama. Kanaaf Oromoon akkuma aadaa ofii durii Buusaf gonofaadhan walhirphee bara wal baasuu qaba. Kanas walqaabsisuun hedduu barbaachisaadha.
Previous Post: Bara hamaa, bara Gollobaan seene Oromoon maal godha?
Next Post: Inside the mysterious Wuhan virus lab: Rare pictures show scientists dressed like astronauts studying deadly pathogens in controversial institute